ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ (၃၀. ၁၁. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်နယ်နိမိတ်တွင် မြောက်မှတောင်သို့ စီးဆင်းနေသော စစ်တောင်းမြစ်တွင် ပေါ်ထွန်းနေသော သောင်များနှင့် စစ်တောင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း
(ခ)-လှော်ကား-ဝါးတရာလမ်းမကြီး၏ လှော်ကားအောက်လမ်းဆုံမှ ဝါးတရာမြစ်ကမ်းအထိ လမ်းအပိုင်း (၁၃၄၅) ပေခန့်အား ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ်ဂျက်အတွင်း အမြန်ဆုံးပြုပြင်၍ YBS ခရီးသည်တင် Bus ကားများကို ဝါးတရာမှ စတင်၍ ပြေးဆွဲပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-ငမိုးရိပ်ချောင်း ဖြတ်ကူးတံတား ကမာကြည်ဝဲယာရှိ ကျောက်၊ သဲဒိုင်ကြီးများအား အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဃ)-ကသာမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ရဲနီဗျားချောင်း အောက်ခြေကြမ်းပြင်မြင့်တက် လာသောကြောင့် လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းခွင် ပျောက်ကွယ်သွားပါ၍ ရဲနီဗျားချောင်းကြမ်းပြင်ကို ယန္တရားအင်အားဖြင့် ပြန်လည်တူးဖော်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့များ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနေသည့် မော်တော်ယာဉ်များ တရားဝင် အသုံးပြုခွင့် ရရှိရေးအတွက် ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(စ)-ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုပြဿနာနှင့် ကားပါကင်အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းရန် မည်သို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-လားရှိုးမြို့ မြို့တွင်းမီးပွိုင့်တပ်ဆင်မှု၏ ဆက်စပ်မေးခွန်းဖြေကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအခြေအနေကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်